Ebola:Dadaalada oo la kordhiyey G.Afrika - BBC News Somali
Ebola:Dadaalada oo la kordhiyey G.Afrika
Dalka Nigeria oo lagu soo waramayo in qofkii sedexaad uu u dhintay cudurka Ebola ayaa dowlada waxaa ay ugu baaqeysaa shacabka in ay la shaqeeyaan quburada caafimaadka.
Waxa soo baxaya warar sheegaya in qof kalkaaliya caafimaad ahaa uu ka baxsaday goob lagu karantiilayey shaqaalaha caafimaadka ee uu cudurkan ku dhacay.
Wasiirka war faafinta ayaa sheegay in kalkaaliyaha caafimaadka ee laga shakinayo in uu ku dhacay cudurkan Ebola uu u baxsaday gurigiisa oo ku yaala barriga dalka, sidaasi darteedna laga cabsi qabo in uu halis geliyo nolosha dad badan.
Dhinaca kalana cadad yar oo ah dawada tijaabada ayaa waxaa la geeyey Liberia si loogu daweeyo laba dhaqtar oo cudurkaasi qaaday. Waxaana lagu soo waramayaa in dawadani ay ka dhamaatay sheybaarkii mareykanka ee lagu sameynayey.
Dalka Sierra Leone, dhaqtarkii labaad ayaa u dhintay cudurka Ebola. Maduwe Kolwe ayaa waxa uu ka shaqeynayey magaalada FreeTown.
Iyadoo ay sii kordheeyso in caabuqa cudurkan uu faafo ayaa WHO waxay sheegtay in dalka Kenya halis aad u ugu jiro in uu soo gaaro cudrka, sababtuna waxa ay ku sheegtay in Kenya aya tahay goob ay ku soo dagaan diyaarado badan, siiba kuwa ka yimaada galbeedka Afrika.
Dalka Germalka ayaa u sheegay dhamaan muwaadiniintooda marlka laga reebo shaqaalaha caafimaadka in ay isaga soo baxaan dalalka Guinea-Bissau, Sierra Leone iyo Liberia oo ah wadamadda uu faraha ba'an ku hayo cudurkan.
In kabadan kun qof ayaa ilaa hadda la og'yahay in ay ugu dhinteen cudurkan Galbeedka Afrika.